Literature – Bachan Tv
Posted on January 7, 2018 January 7, 2018 by BACHAN TV
यो लेख तपाईंको सुन्दर ब्यबहार र अनौठो सोख देखेर तयार पारिएको हो । यो लेख पढेर तपाईंले परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको कामको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ । यो लेख तपाईंको जीवनको समग्र अध्ययन हो । यसमा मैले तपाईंको अद्धितीय जीवनशैलीको प्रशंसा गरेको छु । प्रशंसा सुन्न कसलाई मन लाग्दैन र ? बडो खुशीसाथ तल पढेर हेर्नुहोस् है त….. ।
तपाईं काठमाण्डौं, पोखरा, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज, धनगढी, हेटौंडा, बुटवल वा अन्य कुनै शहरमा बसेर भव्य सेवकाई गर्ने परमेश्वरकोे दास हुनुहुन्छ । तपाईंको अण्डरमा धेरै मण्डलीहरू स्थापना भएका छन् । तपाईं धेरै सेवकहरूको अन्नदाता हुनुहुन्छ । तपाईं कुनै सम्प्रदाय, संस्था वा प्रतिष्ठानको जुझारु नेतृत्व गर्नुहुन्छ । तपाईंलाई समयमा भेट्न सकिँदैन, एक साता पहिल्यै समय लिनुपर्छ । म जान्दछु तपाईं अति व्यस्त हुनुहुन्छ । तपाईंलाई भेट्नेहरू धन्यका हुनेछन् । तपाईं वर्षमा थोरै दिन मात्र नेपालमा बस्नुहुन्छ बाँकी समय तपाईंको विदेशमै बित्छ । हुँदै नभए पनि वर्षमा एकपटक त तपाईंले एसिया छिचोल्नै पर्छ ।
तपाईं इसाईहरूको राष्ट्रिय नेतृत्व गर्नुहुन्छ । तपाईं नेपालको मण्डलीको इतिहास बन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंलाई हेरेर नै धेरै नयाँहरू उत्साह प्राप्त गर्छन् । तपाईंलाई आफ्नो जीवनको हिरो ठान्दै तपाईंजस्तै हुन चाहनेहरू नेपालमा धेरै छन् । तपाईंको व्यक्तित्व शालीन छ । तपाईंमा नम्रता देख्न पाईन्छ । तपाईं सभा सम्मेलनमा आगो झार्ने वक्ता हुनुहुन्छ । तपाईंको वचनले धेरै जनाले जोश पाएका छन् र सेवकाईमा विलीन हुने आँट समेत गरेका छन् । तपाईंले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्ने दुई शब्दले विशेष महत्व राख्छन् । तपाईंले लेख्ने पुस्तकहरु लाभप्रद छन् । नेपालका मण्डलीहरुको निम्ति ती पुस्तकहरु अति नै उपयोगी छन् । अरूको पुस्तकहरूमा तपाईंले दिने शुभकामनाका शब्दहरु पनि अति नै शुभ छन् । तपाईं वास्तवमै अति उच्च हुनुहुन्छ ।
तपाईं परमेश्वरको आशिषित् जन हुनुहुन्छ । तपाईंले सेतै फूलेको कपालमा लगाउनुभएको मेहन्दी महंगो मार्काको रहेछ क्यारे तपाईंको कपाललाई दुरुस्त प्राकृतिक बनाएको छ । फूलेकै भए पनि तपाईंको केस कति राम्रा ? तपाईं महंगो गाडी चढ्नुहुन्छ । वातानुकूलित चारपाङग्रेबाट सर्लक्क ओर्लँदा तपाईं स्वर्गदूत झैं देखिनुहुन्छ । म मान्दछु त्यस बेलामा तपाईं हुनुभएको भए स्वर्गदूतहरुले पनि तपाईंलाई आदर्श ठान्दा हुन् । तपाईंले लगाउने जुत्ता अति चिल्ला छन् । जुत्ता रक्षाकै लागि भए पनि तपार्इंले गाडी चढ्नै पर्छ । फेरि त्यो गाडी परमेश्वरले दिनुभएको आशिष् पो हो त । आशिष्लाई इन्कार गर्न पनि त भएन नि, हैन र ? आशिष् पाएकै कारण तपाईं आलिसान महलको मालिक हुनुभएको छ । तपाईं पनि सायद निर्धक्क हुनुहुन्छ कि जगत्को अन्त्यसम्म तपाईंको महल स्थिर रहनेछ । प्रभुको आगमनमा पनि तपाईं त्यो घर वा गाडीभित्र लुकेर आफूलाई सुरक्षित गराउन सक्नुहुन्छ । बाहिर फेरो जाँदा तपाईं तारे होटलमा बस्नुहुन्छ र होटल मालिकलाई समेत आशिषित् बनाउनुहुन्छ । होटलमा तपाईं सोडसीहरुको चाह गर्नुहुन्छ र श्रीमतीहरूलाई फोनमा आई मिस यु अ लट भन्दै अप्रिल फुल मनाइदिनुहुन्छ ।
तपाईं प्रकृतिलाई अति नै प्रेम गर्ने परमेश्वरको इमान्दार उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ । तपाईंको घर वरपर अदनको बगैंचा छन् । त्यहाँ कहिलेकाहिँ तपाईं आफ्नी श्रीमतीसँग प्रेमालाप गर्नुहुन्छ र आदम र हव्वाको लीला कल्पनुहुन्छ । अहो तपाईंको पुष्पवाटिका कति सुन्दर ? हजारौं पुष्पहरूले शोभित ती बेबिलोनको झुलनबाग झैं देखिन्छन् । तपाईंलाई देख्नेहरूले कुनै रीतिले पनि सम्झन सक्तैनन् कि तपाईं कुनै दिन चप्पल पड्काएर शहरका गल्ली हुँदो रोजिरोटीका लागि भौतारिँदै हिँड्नुहुन्थ्यो । अहिले त तपाईं कहाँ हो कहाँ । तपाईं लाखौं मूल्यमा कुकुर किनेर पाल्नुहुन्छ र आफू झन् सुरक्षित भएको महशुस गर्नुहुन्छ । ती कुकुरहरूलाई तपाईं दैनिक १ किलोभन्दा बढी मासु कलेजो खुवाउनुहुन्छ बरु आफू हड्डीकै सुप पिउन तयार हुनुहुन्छ । आखिर परमेश्वरले दिनुभएको आशिष् न हो । कुकुरको पालन पोषण र रक्षाको लागि तपाईं महिनामा हजारौं खर्च गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ सपिङ्ग गर्न जाँदा तपाईंलाई फोहोरी बालबालिकाले घेर्छन् र तपाईं सामु हात पसार्छन् । यो कुराले तपाईंलाई दिक्क लगाउँछ । तपाईं तिनीहरूलाई हपार्नुहुन्छ र आफ्नो कुकुरको लागि महंगो सामान किनेर फर्कनुहुन्छ । तपाईंले कुकुरलाई आफ्नो सन्तान तुल्याउनुभएको छ, त्यसकारण सन्तानको पालनपोषण गर्ने अभिभावकको कर्तव्य कुशलतापूर्वक निभाइरहनु भएको छ । तपाईं राति कुकुरसँगसँगै सुत्नुहुन्छ र तपाईंकी श्रीमती पनि । तपाईंले श्रीमतीबाट भन्दा कुकुरबाट बढी न्यानो महशुस गर्नुभएको छ । आफ्ना वर्करहरुलाई तपाईं महिनैपिच्छे २५०० बाँड्नुहुन्छ र आफ्नो कुकुरको खर्च हिसाब गरेर वर्करहरुसँग तुलना गर्नुहुन्छ । निश्चय नै तपाईंको कुकुर पाँचजना वर्करभन्दा बढी भएकोले तपाईं मख्ख पर्नुभएको छ । तपाईं आफ्नो घरमा आउने पाहुनाहरूलाई कुकुरसँग परिचय गराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ “यो मेरो सन्तान हो यसलाई म अति प्रेम गर्छु ।” कुकुर लपलपाउँदै तपाईंको मुख चाट्न आउँछ । कुकुरबाट प्रेम पाएर तपार्इं फेरि धन्य हुनुभएको छ ।
तपाईं आफ्नो दाताहरूप्रति अति नै इमान्दार हुनुहुन्छ । उनीहरूले चाहे अनुरुपकै रिपोर्ट बनाउने कला जान्नुभएको छ । उनीहरू आफ्नो लगानीको क्षेत्र अवलोकन गर्न आउँदा तपाईं अग्लो डाँडामा उनीहरुलाई लिएर जानुहुन्छ र देखिने जति गाउँ सबैमा स्तरीय सेवकाई भइरहेको जनाउ दिनुहुन्छ । राजनीतिक परिस्थितिको कारण दाताहरू त्यो गाउँमा जान नसक्ने बताउँदै उनीहरुलाई पुनः होटलमै फर्काइदिनुहुन्छ । दाताहरुको सामुन्ने तपाईं आत्माले भरिनुहुन्छ र आफ्नो जातिको लागि रुनुहुन्छ । तपाईंको रुवाईले दाताको आत्मालाई छुन्छ र सपोर्ट बढ्ने सम्भावना हुन्छ । सपोर्ट बढेपछि तपाईको जीवनशैली स्तरीय हुन्छ । कुकुरहरूको हेरचाहमा ध्यान दिन सकिन्छ । २५ सय गोटाको एकाध वर्कर पनि थप्न सकिन्छ । तपाईं यी सबै गुनेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ ।
तपाईंको जीवन बखान सुनेर तपाईंलाई रमाइलै त लाग्यो होला नि । केही नराम्रो लाग्यो भने तलको ठेगानामा इमेल गर्नुहोला वा पत्रिकामा प्रतिकृया पठाउनुहोला । यतिखेर चाहिँ तपाईंलाई परमेश्वरले गर्नुभएको सहायताको लागि आउनुहोस् एक पटक फेरि धन्यवाद दिऊँ ।
Posted on October 23, 2017 by BACHAN TV
But below the awe-inspiring Himalayan peaks liesacountry which is atasignificant point in its constitutional and political life. This beautiful country is at pivotal moment where recent and prospective changes, if not amended, may have serious consequences for freedom of religion or belief in the country. This was the overarching conclusion drawn by an international delegation of parliamentarians that visited Nepal, 9-12 October 2017.
International parliamentarians were shocked to find that while Nepal’s constitution establishes the country asasecular state, there are certain constitutional provision that infringe upon freedom of religion or belief in the country. Of particular concern is Article 26(3), which jeopardises the fundamental right of every individual to followareligion of his or her own choice and to manifest that religion in word and action. It states:
True, Nepal is not Pakistan, but we have already seen threats to freedom of religion or belief in Nepal that gives cause for concern that the country risks following Pakistan downaslippery slope of increased restrictions and heightened societal hostility against religions minorities. Last June, eight Nepali Christians were charged with attempting to convert children after simply sharingacomic book on the story of Jesus. Fortunately they were acquitted of all charges in December 2016, but similar cases could occur in the future, particularly if this Bill becomes law and the Constitution remains unchanged.
In the rush to pass its new constitution the government appears to have forgotten it isasignatory to international treaties that protect an individual’s right to haveareligion, to change that religion and even to have no religion at all. Nepal needs to be careful that it doesn’t developareputation as the type of country that on the one hand signs international treaties, but then does the polar opposite when drafting and implementing its own laws.
This situation must change. Civil society organisations and parliamentarians in Nepal need to redouble their efforts to hold the government to account for its international obligations. This though isastruggle that is far too important just to be left to domestic actors.
Posted on October 19, 2017 October 19, 2017 by BACHAN TV
छुकछुक छुकछुक गर्दै छुट्न लागेको एउटा रेलको यात्री जस्तै, सुनामीको बाढले लखेटिएर हतार हतार भाग्दै गरेको हतास मानिसजस्तै रोहितको जीवन उसको दौड, उस“गै सधै“ टा“सिरहने झोलाले दह्रो संकेत गरेको छ । कसैस“ग गफ गर्दा होस् या खाना खा“दा होस्, उसको शरीरमा झुण्डिएको झोला उसबाट अलग्ग हुन कहिल्यै मान्दैन । कहिल्यै निस्कन नसक्नेगरी सुपरग्लुले नै चिप्काएसरी । थाहा छैन राती सुत्दा पनि झोला च्यापेर नै सुत्दो हो ।
“के गर्ने बानी नै लागिसक्यो । जीउमा झोलाको भारी नभए के के नपुगेजस्तो के के नभएजस्तो । जस्तो अलिनु तरकारीजस्तै, लय र छन्द नमिलेको कविताजस्तै अनि लाजै पचाएर भन्दाखेरी गधालाई भारी नपुगेजस्तै ।” फिस्स हा“स्थ्यो अनि फेरि गम्भीर हुन्थ्यो रोहित कसैले उसको शरीरमा सधै“ टा“सिरहने झोलाबारे प्रतिक्रिया जनाएको बेला ।
रोहित अपवाद होइन, एउता वर्गको प्रतिनिधि पात्र हो । रोहितजस्ता प्रायः पास्टरहरूको का“धबाट झोला उत्रिदैन । उनीहरूको साथमा हरपल हरदम झोला झुण्डिरहेको हुन्छ । झोलाको प्रकृति फरक होला, बनौट फरक होला अनि सोही मुताबिकको मूल्यमा भिन्नता होला । कोही पिठ्युमा डे ब्याग बोक्छ भने कोही अगाडि एउटा का“धमा मात्र तुर्लुङ्ग ऊनी झोला भिर्छ । अरुहरूले स्पोर्ट ब्याग, ट्रेकिङ ब्याग अनि मिलेट ब्याग बोक्छन् । सुकिला सुट र टाइमा ठा“टिने हुनेखानेहरू भने फाइल ब्याग र ल्यापटप ब्याग बोक्न थालिसकेका छन् ।
उपहार पाएको रहेछ रोहितले झोला भ्वाइस अफ पास्टर्स भन्ने संस्थाबाट । झोलास“गै सुट र पाइन्ट पनि । गोरखाको बिर्दी बजारमा रोहितको मण्डली छ । भेटी दसांस गरेर महिनामा दुई हजार उठ्दैन उसको मण्डलीमा । भुराभुरी समेत जोड्दा मण्डली आउने सय नाघ्छ तर हरेक हप्ता होइन । बप्तिस्मा लिने उस्तै बीसको हाराहारीमा । खेतीपाती र वस्तुभाउमा सधै“ व्यस्त हुन्छन् उनका विश्वासीहरू । महिलाहरूलाई खेतबारीको कामबाट कहिल्यै पूmर्सद नमिल्ने । मण्डली भवनमा भजन गाएको सुनेपछि गोड्दागोड्दैको धान छोडेर मण्डली भवनतर्पm दौडिन्थे । असिनपसिन हु“दै एक कुनामा गुन्द्री तानेर बस्थे पटपटी फुटेको गोडालाई मैलो फरियाको सप्कोले छोप्ने असफल प्रयास गर्दै । कुमाल बज्यैले बनाएको चिया नखाई त काम गर्ने जा“गर नै चल्दैन भनेर एकाबिहानै बिर्दी बजार झर्ने पुरुष भनाउ“दाहरू पनि भजनको तीखो आवाज सुनिन थालेपछि मात्र हा“सको चालमा मण्डलीतर्पm लाग्थे । खोल्सातिर पुगेपछि मुखमा कोचेको खैनीलाई एकपल्ट यताउता पल्याकपुलुक हेर्दै फुत्त फाल्थे । कसैले देखिहालेमा कोइला जस्तो दा“त देखाउ“दै ङिच्च हा“स्थे, “के गर्नु, नानीदेखि लागेको बानी । यो च्याप्न पाइएन भने के भा के भा जस्तो हुन्छ । काममा जा“गर नै चल्दैन ।” देख्ने सज्जनहरूलाई उनीहरूको मुखबाट ह्वास्स निस्केको खैनीको तिख्खर गन्धले बान्ता नै आउलाजस्तो भई हतार हतार नाकमुख छोपिहाल्नुपथ्र्यो । उता रोहित भने डा“डाको टुप्पामा बसेर कुन दिशाबाट को आउ“दैछ भनी स्तुतिप्रशंसाको समयसम्म पनि आ“खा तानी तानी हेरिरहन्थ्यो । थरी थरीका यस्ता ‘विश्वासी’हरूलाई संगालेर बसेका पास्टर रोहितलाई भ्वाइस अफ पास्टर्स संस्थाले दिएको सुट आÇनो मण्डलीमा सुहाएजस्तो लागेन । पसिना र सुर्तीको तिख्खर मिश्रणमा सुट कागको बथानमा बकुलाजस्तै लाग्यो ।
रोहितलाई झोला च्याप्न भ्वाइस अफ पास्टर्स संस्थाले सिकाएको हो । पहिला त ऊ प्लास्टिकको झोलामा बाइबल र भजन किताब राखेर हिंड्ने गथ्र्यो । स्वतन्त्र मण्डली । कहीं कतैबाट सपोर्टको आशा थिएन । आशाले खोलेका पनि थिएन । परमेश्वरबाट दर्शन पाएर खोलेको भन्थ्यो । बाउको बिंडो पा“च रोपनी खेतमा खार खोलाको मद्दतले दुई बाली धान लगाउ“थ्यो । धान लगाउ“थ्यो भन्नु मात्रै हो, एक दुई पल्ट पानी हाल्न र धान काट्ने बेला छाता बोकेर डिलमा उभिन बाहेक उसले पूmर्सद पाउ“दैनथ्यो त्यही विश्वासीहरूको सेवामा खटिंदा । उसको सोझी श्रीमती सोफियाले सबै घरव्यवहार धानेकी छिन् । सोफियाले विश्वास गर्नु अघि सैतानबाट धेरै दुःख झेलेकी थिइन् । आंैसी पूर्णिमा आउनुहु“दैन, शरीरभरी सोला हानेर इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुग्थिन् । रोहितले अनेक प्रयास गर्दा पनि सोफियालाई ठीक पार्न सकेन । सहाराविहिन अवस्थामा एक दिन रोहितको पूmपुले ‘बुहारीलाई चर्चमा लगे निको हुन सक्छ, चर्च लैजा’ भनी फोनबाट आज्ञा दिएपछि ऊ सोफियालाई लिएर चर्च सोध्दै सोध्दै सिर्दी गएको थियो । सोफियाको लागि मण्डलीले प्रार्थना गर्न थाल्यो । उनीहरू दुवै जनाले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरे तर निकै हप्तासम्म सोला हान्ने क्रम रोकिएन । एक दिन पिपलको फेदमा बनाएको चौतारीमा आराम गरिरह“दा रोहितलाई धामीले सम्झायो, ‘रोहित बाबु, चर्च लगेर तिम्री श्रीमती निको हु“दैन । चर्चबाट मन्त्र फुकाएर आऊ । म तिम्रो श्रीमतीलाई निको पारिदिन्छु ।’ धामीको कुराले रोहितलाई दोसा“धबाट उभ्यायो । चर्च लान थालेको धेरै समय भइसक्यो । रोग बीसको उन्नाईस हु“दैन । यता धामी चर्चबाट मन्त्र फुकाएर आएमा निको पार्ने कुरा गर्छ । चर्चमा त त्यस्तो कुनै मन्त्र नै गरेको छैन । कसरी फुकाएर ल्याउनु ? आखिर धामी झा“क्रीकहा“ पनि अघाउञ्जेल नधाएको होइन । अब जे सुकै होस्, चर्च जान छोड्दिन भनेर उसले धामीलाई जवाफ फर्कायो । त्यसको केही दिनमै सोफियालाई ठीक हुन थाल्यो । उही सोफिया आज पा“च रोपनी जग्गामा धान खेती गरी परिवार धानिरहेकी छिन् । गोठमा गाई पनि स्याहारेकी छिन्, कुखुरा पनि पालेकी छिन् । घरको चामलले गर्दा रोहितलाई सेवकाइ गर्न भरथेग पुगेको छ । बारीको तरकारीले मनग्गे पुगेको छ । परमेश्वरको अनुग्रहले बा“चेको हुनाले सोफियाले नै रोहितलाई सेवकाइमा लाग्न प्रेरित गरेकी थिइन् ।
संस्थाबाट झोला पाएपछि रोहितलाई सेवकाइमा केही सहज भयो । सिर्दी मण्डलीका अगुवा दूधराजले उसलाई संस्था चिनाएको थियो । झोला पाएको दिन ऊ निकै खुशी भएको थियो । अहा ¤ कति राम्रो झोला भनेर अझ एक दुई जनाले प्रशंसा गरिदिंदा उसलाई आपूm एक हात माथि पुगेको भान भएको थियो । प्लास्टिकको झोलामा भन्दा यो स्पोर्ट ब्यागमा बाइबल, भजन किताबको अलावा अरु धेरै थोक अट्ने भएको छ । अब उसको झोलामा कलम, नोटबुक, पकेट क्यालेण्डर, रुमाल, मञ्जन बुरुस, काइ“यो, साबुन, चश्मा सबै अट्छ । सेवकाइको क्रममा जुनसुकै ठाउ“मा बास बस्नु परे पनि अब उसलाई कुनै समस्या छैन । नित्यकर्म गर्नलाई आवश्यक सबै थोक झोलामा अटेकोले ऊ ढुक्कस“ग बास बस्न सक्छ । उसले दूधराजलाई मनमनै धन्यवाद दियो ।
बेला मौकामा पास्टर रोहितलाई संस्थाले काठमाडौं बोलाइरहन्थ्यो । झरी बादल होस् या कठ्याङ्ग्रिने जाडो । उसलाई सेमिनारमा अनिवार्य पुग्नु पर्दथ्यो । फेरि सेमिनारबाट कहिले पनि खाली हात फर्कन पनि पर्दैनथ्यो । यसैले मण्डलीको जुनसुकै कार्य पनि था“ती राखेर ऊ काठमाडौंतिर हुतिन्थ्यो । संस्थाले दिएको सुट काठमाडौं जाने बेला मात्र काममा आउ“थ्यो । दूधराजस“गै सेमिनारमा भाग लिने क्रममा उसले स्तरअनुसारको झोला पायो । प्लास्टिकको झोलाले पनि निकै वर्ष सेवकाइ धायो । भएकै थियो । पछि संस्थाले गर्दा स्पोर्ट ब्याग बोक्ने अवसर पायो । चलेकै छ । गाउ“ठाउ“मा त्यही झोला पनि कति पल्ट ‘ठूलो’ देखिन्थ्यो ‘विश्वासी’हरूको माझ । तर सहरमा सेमिनारीहरूको बीचमा भने त्यही झोला निकै ‘सानो’ देखिने रहेछ ।
“दूधराज दाजु, झोला पनि थरी थरीको हु“दो रहेछ हगी । आÇनै परिवारको दुःखले मण्डलीसम्म डो¥यायो । तपाईंको सल्लाहले मण्डली पनि स्थापना गरियो । कस्तो झोला बोक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन । हुन त प्लास्टिकको झोलाले पनि निकै समय धानेकै हो । तपाईंको संगतले गर्दा यति राम्रो झोला बोक्ने अवसर पनि मिल्यो । हामी गाउ“बाट आएकालाई त यही पनि ठूलो छ तर यहा“ त वाफ रे वाफ कद अनुसारको झोला । झोलाको वजनले नै थिच्ला जस्तो पो छ त ।” रोहितले कौतुहलतालाई मनमै दबाइराख्न सकेन । झोलाको बयानले एकपल्ट दूधराज पनि जिल्ल प¥यो । उसले पनि हतारमा आ“खा डुलायो । पुलपिटबाट कुर्लदै गरेको पास्टरको झोलाले पुलपिटको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेको थियो । होचो कदको पास्टरको टाउको त्यही झोलाले बेला बेलामा छेक्ने गथ्र्यो । पास्टरभन्दा झोलाको महŒव बढी भएको जस्तो महसुस हुन्थ्यो । पुलपिट पछाडि आसन ग्रहण गरेर बसेका चिल्ला, गोरा, गहु“ गोरा, अग्ला, होचा, मोटा, भु“डी हालेका, स्याप्प सुकेका, कपाल रंगाएका, तालु खुइलेका सबै महानुभावहरू पनि कसैले चोरेर लग्ला जस्तै गरी हातमा झोला च्यापेर बसेका थिए । दूधराजले कहिले पनि याद गरेको थिएन । आज पहिलो पल्ट उसले पनि पास्टरको प्रवचनमा भन्दा पनि झोला नियाल्नमा समय खर्चिन थाल्यो । सा“च्चिकै रमाइलो भयो उसलाई पनि थरी थरीका आकर्षक झोलाहरू देखेर । संस्था प्रवेशको सुरुवातीमै पाएको आÇनो झोला त अब खुइलिन थालिसकेको थियो । बूढीले दुई तीन पटक त उध्रेको भाग बेरंगी धागोले सिइदिइसकेकी थिई । भान्छाको ध्वा“सोले कालोमैलो हुने नै भयो । आÇनो झोला देखेर आपैmलाई पहिलो पल्ट लाज लाग्यो । गाउ“ठाउ“मा ठा“टले बोक्ने झोला संस्थाको कार्यक्रममा लुकाउनुपर्ने भयो ।
“माफ गर्नुस् है दाजु । मैले अघि तपाईंलाई प्रवचनको बेला झोलाको कुरा कोट्याएर डिस्टर्ब गरे“ । झोलाको सकसकले साउती गर्न बाध्य बनायो ।” खाना खाने क्रममा रोहितले आÇनो गल्ती महसुस ग¥यो । वास्तवमा रोहितले झोलाको कुरा उप्काएपछि दूधराजको प्रवचन सुनाइमा पूर्णविराम लागेको थियो । त्यसपछि ऊ झोलाकै अनुसन्धानमा लागेको थियो । का“धमा बोकेको झोलास“ग रिस उठेको थियो । भ्वाइस अफ पास्टर्स संस्थामा धाउन थालेको पा“च वर्ष नाघिसकेको छ । संस्थाप्रवेशस“गै पाएको झोलाले सौता देख्नुपरेकोे छैन । सुटको पनि रंग उडिसकेको छ । खेलौनाजस्ता सोलारका चाइनिज बत्तीहरू कति त घर पुग्ने पाउ“दैन । पुगेका बत्तीहरू एक दुई पल्ट उज्यालो पार्दै एउटा कुनामा थन्किन थालेका थिए । प्रत्येक पटकको भेटघाटमा केही न केही त अवश्य पाउ“थ्यो तर धेरैजसो म्युजियममा सजाउन मिल्ने हुन्थ्यो । दिएको कुरा नलिई पनि नहुने । लियो भने पनि गाउ“को झुप्रोमा नसुहाउने, नअटाउने । बरु पटकै पिच्छे थरी थरीका झोला नै दिए हुने । दूधराजले अहिले महसुस गर्न थाल्यो । किनभने पास्टरको लागि झोला जति महŒवपूर्ण थोक अरु के नै होला । खाना खा“दा, शौचालय जा“दा, यात्रा गर्दा, सुस्ताउ“दा हरपल साथ रहने भनेकै झोला हो । श्रीमतीले साथ छोडेको बेला समेत झोलाले साथ छोड्दैन ।
“वास्तवमा तपाईंले भनेपछि म झल्या“स्स भए“ रोहित भाइ । यतिका वर्ष भयो यो संस्था धाउन थालेको । तपाईं मेरो मनको मान्छे । राम्रै लागेर तपाईंलाई पनि लिएर आए“ । साथी पनि हुने सहयोग पनि हुने भन्ने ठानेर । तपाईंले सोधिहाल्नुभयो । यो झोला भन्ने चीज अजिबको छ । उः पर, झोला च्यापेर अट्टहास हा“सो हा“सिरहेको पास्टर देख्नुभयो नि । गौर गरेर उसको झोला हेर्नुहोस् त । कति बडेमाको छ । ढ्याप्पै उसको भु“डी ढाकिएको छ । लाग्दो होला के के होला उसको झोलाभित्र ?” चम्चाले मुखमा गा“स हाल्दै दूधराजले सत्यताको एउटा पाटो उप्काउन थाल्यो । वास्तवमा दूधराजले पनि यही आएर चम्चाले खाना खान सिकेको हो । बूढीले खाना खाने बेलामा एउटै सिलाबरको थालमा राखिदिएको दाल, भात, तरकारी मज्जाले हातले मुछी स¥याप स¥याप खाने बानी परेको दूधराजलाई चराले जस्तै चम्चाले थोरै थोरै गा“स मुखमा कोच्दा सुरुमा त भोकै मरेको थिएन । तर ठाउ“अनुसारको व्यवहार सिक्नुपर्ने नै भयो । अहिले सहरमा बानी परिसक्यो । घरमा त परमेश्वरले दिनुभएको चम्चा भन्दै हातैले खाना खान अभैm छोडेको छैन । सिलाबरको थाललाई भने अहिले स्टिलको थालले प्रतिस्थापन गरेको छ ।
रोहितले दूधराजले इङ्गित गरेको दिशातर्पm हे¥यो । खुइलेको तालुमा बा“की भएको कपाल पनि बडा गजबले तेल राखेर टल्काएको थियो । खासै पर नभएकोले उसको आ“खाको चमक सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । सा“च्चै के के अटाउ“छ होला त उसको झोलामा ? उत्तर पाउने आशामा खा“दा खा“दैको गा“स छोडेर रोहितले दूधराजको मुहारमा हे¥यो । मुखको गा“स सकेर दूधराजले भन्न थाल्यो, “रोहित भाइ, सत्य तीतो भए पनि लुकाउनु हु“दैन, लुक्दैन पनि । ऊ अहिले मण्डलीको उच्च स्थानमा पुगेको छ । सुन्दैछु भ्वाइस अफ पास्टर्स संस्थाको पनि अध्यक्षको दाबेदार हो । उसको झोलाभित्र साम, दान, दण्ड, भेद सबै कुरा अटाउ“छ । कुन विश्वासीलाई कसरी तह लगाउने सबै कुरा झोलाभित्र मज्जाले मिलाएर राखेको छ । पास्टरमा अभिषेक भएपछि त झन् उसको चुरीफुरी निकै बढेको छ । कसैले केही भनेमा अभिषिक्त जनलाई जे पायो त्यही भन्ने ? गाली गर्ने ? भन्दै का“चै निलौंला जस्तो गथ्र्यो तर आÇनो मुखमा भने लगाम लगाउ“दैनथ्यो । झोलाभित्रबाट गालीको वर्षा सुरु भएपछि वरपरका विश्वासीहरूले कान थुन्नु नै वेश । शंका लाग्छ, वास्तवमा उनीहरूलाई कसले अभिषेक गरेको हो ? मानिसले कि परमेश्वरले ?”
“आÇनो आङमा भैंसी हि“डेको नदेख्ने तर अर्काको आङमा जुम्रा हि“डेको भनेको जस्तै हो कि ? अझ म त सुन्दैछु यहा“ त आपैmले आपैmलाई अभिषेक गर्ने पास्टरको पनि कमी छैन । धन्न उनलाई त कसैले अभिषेक गरेको रहेछ ।” रोहितले हरियो खुर्सानी टोक्दै भन्यो । उसको कुरामा सही थाप्दै दूधराजले भन्यो । “हो, ठ्याक्कै त्यस्तै । अनि ऊ अर्को कुखुराको साप्रा लुछ्दै गरेको पास्टर देख्यौ ? उसको अभिषेक कहिले भएको हो कसैलाई थाहा छैन । ऊ भने दार्जिलिङमा अभिषेक भएको भनेर फलाकी हि“ड्छ । अहिले गाउ“तिरका पास्टरहरूलाई अभिषेक गर्न थालेका छन् । ऊ जहिले पनि त्यही ल्यापटप ब्याग बोक्छ । उसले आÇनो झोलाभित्र हुनुपर्ने नैतिकता चाहि“ झिकेर फालेछ अनि अहिले बदनामीको पोको घुसारेर राखेको छ भन्ने सुन्छु । खोई, के हो ? के हो ? तैपनि सबैले उसैलाई मान्छ । हामी पनि मानेरै यहा“ आएका हौं । उसको ब्यागभित्र रहेको ल्यापटपमा सारा संसार अटाउ“दो रहेछ । हेर्न हुने, हेर्न नहुने, गर्न हुने, गर्न नहुने सबै कुरा भ्याउ“दोरहेछ । यसैले त सबै उसैको पछि लाग्दोरहेछ । उसको झोलाबाट चुहेका केही नोटहरू टिप्न पाइन्छ कि भनेर हामीजस्ता सोझा पास्टरहरू हिउ“द बर्खा केही नभनी दौडेर आउ“छौं ।”
“सबै उस्तै हो ?” खा“दाखा“दैको प्लेट भुइ“मा राखेर रोहितले सोध्यो ।
“सबै कहा“ उस्तै हुन्छ र ? धान खेतमा सामा त भइहाल्छ नि । परमेश्वरका सा“चो आराधकहरू त यसरी पद र पैसाको पछि लाग्दै लाग्दैन अनि लागेका पनि छैनन् । यहा“ त राम्रो भन्दा पनि नराम्रोको प्रचार बढी हुने भएर विश्वासीहरूको मनमा पास्टरहरूप्रति वितृष्णा जागेको मात्र हो । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर अभिषेकको धाक लगाउ“दै हि“ड्ने यस्ता एक दुई जना व्यक्तिहरूले गर्दा समाजले औंला उठाउने मौका पाएका छन् । असल पास्टरहरूले त संसारको मान पदवी भन्दा स्वर्गको मुकुटको लागि मरिमेटेर लागिपरेका छन् । संसारमा उनीहरूको नाम छैन न त दाम नै कमाउन सकेका छन् तर परमेश्वरको नजरमा असल मोतीहरू हुन् । यहा“ युसुफजस्ता शुद्ध हृदयका अनि पावलजस्ता त्यागी पास्टरहरू कति छन् कति । उनीहरू मण्डलीको सेवकाइमा दिन–रात खटिरहेका छन् जसले गर्दा यसरी संस्था खोल्दै हि“ड्न भ्याएका छैनन् । अहिले यस संसारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन कसले गरिदिने ? भनिन्छ नि ‘बोल्नेको चामल बिक्छ नबोल्नेको पिठो पनि बिक्दैन ।’ समय परिवर्तनशील छ । अब चामलभन्दा पिठोको महŒव बढिरहेको छ । चामल खान रुचाउनेहरू सुगरको रोगी हुन थालेका छन् । हामी पनि यही चामलको खोजीमा यहा“सम्म आएका हौ“ । एउटा झोलाको लोभले विश्वासीहरूको चाहनालाई लात मारेर यताउता भौंतारिरहेका छौं । वास्तवमा हामी हाम्रा विश्वासीले दिएको पिठोमै सन्तुष्ट हुन जानेको भए हाम्रो जीउ पनि लाग्थ्यो, तागत पनि मिल्थ्यो । मैले पनि यो कुरा ढिलो बुभे“m र अहिले पश्चाताप लागिरहेछ । अब पनि तपाईंलाई यो सत्यता प्रकट गरिएन भने मलाई परमेश्वरले पनि माफी दिनुहुन्न जस्तो लागेर आज भन्दैछु ।” दूधराजले भन्दै गर्दा रोहित जुरुक्क उठ्यो । ऊ झोला बोकेर फटाफट बाहिर निस्क्यो । दूधराज पनि उसको पछि पछि लाग्यो ।
घर पुग्नु अगाडि खार खोलामा रोहितको ध्यान गयो । उसकी श्रीमती सोफिया खार खोलाको पानी धान खेतमा लगाउ“दै रहिछिन् । श्रीमतीको नजिक पुगेपछि उसले आÇनो झोलामा रहेको सबै थोकहरू एउटा प्लास्टिकको झोलामा राख्यो । उसले झोलालाई खार खोलामा बगाइदियो । श्रीमतीको मुहारमा हेरेर उसले भन्यो, “सोफिया, त्यो झोलाको पछि लाग्दा लाग्दा झोलाजस्तै म उध्रिदै गए“ । त्यो झोला हाम्रो मण्डलीमा सुहाएन पनि । यसैले बगाइदिए“ । अब म पनि तिमीस“गै खेत गोड्छु, पानी लाउ“छु, तरकारी रोप्छु अनि त्यही तरकारी प्लास्टिकको झोलामा राखेर आ“बुखैरेनी बजारमा लगी बेच्छु । झरी, बादल, आ“धी, असिना नभनी झोलाको पछि दौडिन ठीक लागेन । जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोप पनि यही विश्वासीहरूस“ग मिलेर खप्छु । विश्वासीहरूको छहारीमा नै मैले रम्नुपर्छ ।” प्लास्टिकको झोला बोकेर रोहित घरतर्पm उकालो लाग्यो । उसको कुरा बुझ्न नसकेर सोफिया ऊ गएको बाटोतर्पm हेरिरहिन् ।
Posted in Literature1 Comment on पास्टरको झोला
Posted on October 16, 2017 October 16, 2017 by BACHAN TV
उपयुक्त ज्ञान र सटिक उत्तर नपाएको कारण मानिसहरु पिच्छे बाइबलप्रतिको
धारणा फरक–फरक रहेको पाइन्छ । कतिले सोच विचार नगरी बाइबल मानिसहरुको उत्फट्याङ्गको उपज हो, भन्दछन् । तर खास बाइबल के हो ? र यसको अस्तित्व र विकास कसरी भयो भन्ने आधिकारिक तथ्य पत्ता नलागाउँदासम्म हामी आफै पनि भ्रममा पर्छौं र अरुलाई भ्रम छर्दै हिँड्छौं । भ्रममा पर्नु र भ्रममा पार्दै हिँड्नु अघि भ्रमलाई पूर्णविराम लगाउँन निष्पक्ष
खोज अनुशन्धान गर्नु नै यात्राको पहिलो कदम हो । त्यसो भए बाइबलको अस्तित्व विकास कसरी भयो त ? बाइबल अस्तित्वमा हुनुको कारणहरु हेरौँ ।
१.परमेश्वर स्वयंम आफै अस्तित्वमा भएकोले ः बाइबल परमेश्वरको अस्तित्व छ भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण हो । उहाँको अस्तित्व चाहिँ आदि र अन्त्य, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ भन्ने हो । (यशै ४८ः१२; प्रका १ः८) अर्को शब्दमा उहाँको सुरु र अन्त छैन । परमेश्वर हिजो आज र सदासर्वदा एक समान हुनुहुन्छ ।
(हिब्रु १३ः८) अब यहाँ बाइबल कुनै दुई व्यक्तिको सम्बन्ध होइन यो पूर्ण एक व्यक्तिको सम्बन्ध हो । त्यसैले बचन नै
परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वर नै बचन हुनुहुन्छ । (युह १ ः १,२) बचनले उहाँको अस्तित्वलाई प्रकट गदर्छ भने उहाँले आफ्नो अस्तित्व बचनद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ । त्यसैले सबै टलेर जानेछ तर परमेश्वरको बचन टल्ने छैन । यो अस्तित्वमा छ ।
२.परमेश्वरका मानिसहरु अर्थात ख्रीष्टको मण्डली अस्तित्वमा भएकोले
परमेश्वरको बचन स्वर्गबाट लेखेर दिएको पुस्तक होइन न ता पृथ्वीको मानिस स्वर्ग उक्लेर गई लिएर आएको बचन हो ।
परमेश्वर आफै पृथ्वीमा आफ्नो मानिसहरुकहाँ बारम्बार उपस्थितिमा
प्रेरणा दिई लेखिएको बचन हो ।
(व्यब ३० : ११–१४) जहाँ सिद्धता छ त्यहाँ धर्मशास्त्र चाहिँदैन न ता कानूनको नै व्यवस्था हुन्छ । ज्योति अन्धकारको लागि हो भने झैं परमेश्वरको बचन पाप र अधर्म भएको संसारको लागि खाँचो बन्यो । बाइबल परमेश्वरले पृथ्वीका आफ्ना मानिसहरुसँग हिंड्डुल गर्दा बताइएका उद्देश्य, योजना, प्रेम, प्रतिज्ञा, आशिष, छुटकारा, उद्धार, अगुवाई र मार्गनिर्देशन गरेका कुराहरुसंग सम्बन्धित छ । बाइबल अस्तित्वमा हुनको कारण परमेश्वरका मानिसहरु पुरानो करारमा चुनिएको इस्रायली जाति र नयाँ करारमा विश्वास गर्ने उहाँको दुलही मण्डली हो ।
(उत् १२ : १–३; मत्ती १६:१८) जसले गर्दा बाइबल सिकाउनलाई, अर्र्ती दिनलाई,र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायिक छ । (२ तिमो ३ : १६ ) बाइबललाई पवित्र आत्माले सुरक्षित र सुदृढ बनाएको कारण अस्तित्वमा छ । (यूह १६ः १३)
अब हामीले परमेश्वरको बचन बाइबल लिखित रुपमा कसरी अस्तित्व र विकास हुँदै गयो भन्नेबारेमा हेर्नेछौं ।
बाइबल ९द्यष्दभि० शब्द ल्याटिन भाषाको दष्दिष्बिू बाट लिईएको हो । जसको अर्थ ुउबउभचु यच ु कअचयििु भन्ने हुन्छ । नेपालीमा पत्र वा चर्मपत्र भनिन्छ । बाइबल पुस्तकहरुको संगालो हो ।
परमेश्वरको बचन बाइबल भिन्दा–भिन्दै व्यक्ति र समयकालक्रमानुसार करिब ४० जना लेखकले करिब १६ सय वर्ष अवधिमा परमेश्वरले गरेका काम र घटनाक्रमलाई क्रमबद्धरुपमा संग्रह गरेको ६६ वटा पुस्तकहरुको संगालो नै बाइबल हो । यसलाई पुरानो करार
(३९) र नयाँ करारमा (२७) गरी दुई भागमा विभाजन गरीएको छ ।
१. पुरानो करार अस्तित्व र विकास ः बाइबल एकै समयमा लेखिएको सिंगो पुस्तक होइन । सबै भन्दा पहिला मरमेश्वरले मोशालाई व्यवस्थाको पुस्तक दिनुभयो ,जुन पाँचवटा छन् । यहि नै पहिलो पटक लिखित रुपमा अस्तित्वमा आएको परमेश्वरको बचन थियो । जसलाई हिब्रुमा तोरह भनिन्छ । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा परमेश्वरले इस्राएलको परमेश्वरको रुपमा यहोवे परमप्रभुको रुपमा अगुवाई गर्दै हिड्नुभयो मोशाको मृत्युपछि यहोशूदेखि मलाकीको पुस्तकसम्म
परमेश्वर यहोवे परमप्रभुको रुपमा विभिन्न
र अगमबक्ताहरुबाट बोल्नुभयो जुन बचनलाई तिनीहरुले लेख्ने काम गरे । यहोवेको अर्थ परमप्रभु हो । परमेश्वर सबै जातिहरु, भाषाहरु, देशहरुका एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ । तर मानिसहरु पापबाट पतन भइसकेपछि मानिसहरु विभिन्न जातिहरु, भाषाहरु र देशहरुमा संसारभरी फैलिदै गए
(उत् १०ः३२) र आ–आफ्नो इच्छाको कुरा गर्दै गए । तर परमेश्वरले एक व्यक्तिलाई चुन्नुभयो जसको नाम अब्राहम थियो । जो पछि गएर इस्रायली जातिको रुपमा परिचित भयो । परमेश्वरको प्रतिज्ञा अब्राहममाथि थियो । (उत् १२ :१–३) त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ यहोवे परमेश्वर नै सारा मानिसहरुका
परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी संसारका सबै मानिसलाई बताउनु थियो । त्यसैले परमेश्वर यस संसारमा सबैका परमेश्वर भएतापनि सबैले उहाँलाई नचिनेको कारण परमेश्वरले आफैलाई इस्रायलीहरुका परमेश्वरका रुपमा सबै पृथ्वीका मानिसहरुबीचमा आफूलाई चिनाउँन खोज्नु भयो । त्यसैले होला यो बाइबल यहुदीको वा ख्रीष्टियनहरुको धर्मशास्त्र हो,भनी मानिसहरु बुझ्दछन् तर परमेश्वरचाहिँ आफ्नो बचनबाट सबैको परमेश्वरको रुपमा चिनाउँन चाहानुहुन्छ । यसरी यहोशूदेखि मलाकीसम्मका पुस्तक लेखिएका थिए तर संग्रह गर्र्नेकाम भएको थिएन । पछि यहुदीहरुले यसलाई संग्रह गर्ने काम गरे जसमा २४ वटा पुस्तकहरु थिए । जसलाई तनक Septugint_भनिन्थ्यो । करिब ३०० ईपू देखि ७२ जना विद्धानहरुले १५० वर्ष भन्दा बढि लगातार परमेश्वरको बचन खोज्ने पत्ता लगाउँने त्यसलाइ छान्ने र संकलन गर्ने काम गरियो । जसलाई सेप्टुजिन्ट भनिन्छ । जसको अर्थ सत्तरी भन्ने हुन्छ । यसलाई LXX पनि भनिन्छ ।
यो अलेक्जेन्ड्रियामा ९ब्भिहबलमचष्ब० ईपू १३२ मा संकलन गर्ने काम सकिएको थियो । यसरी बाइबलमा पुस्तकहरु थपिनेक्रम जारी रह्यो । दोस्रो शताब्दीतिर ई.पू यसलाई यहुदीहरुले हिब्रुमा (kitvei hakkodesh) ल्याटिनमा Biblica sacra अंगे्रजिमा Holy Scripture’ जसको अर्थ पवित्र धर्मशास्त्र भनियो । यहीबाट धेरै पछि आएर Holy Bible ” अर्थात पवित्र बाइबल भनेर नामाकरण हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछि आएर ९०–११८ ई. स मा त्जभ अयगलअष् िया व्बmलष्ब ले पुरानो करारलाई ३९ वटा पुस्तकमा अस्तित्व दिने काम ग¥यो । यसरी पुरानो करारलाई ३९ वटा पुस्तकको रुपमा निर्धारण गरेको पाइन्छ ।
२. नयाँ करारको अस्तित्व र विकास : येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आइसकेपछि उहाँका चेलाहरुले देखेका, भोगेका र सुरुका मण्डली स्थापना र सुसमाचारको काम र मण्डलीहरु, विश्वासीहरु अगुवाअरुलाई लेखिएका पत्रहरु पाइन्छन् ।
नयाँ करार करिब ४५–८५ ई. स मा करिब १० जना येशूका चेलाहरुका साथै चेलाहरुसंग बोलावट पाएका सुसमाचारमा सहभागी सहकर्मीहरुले लेखेका पत्रहरु हुन् । यसलाई पछिबाट संकलन गर्ने काम विभिन्न मानिसहरुले काम गरे ।
अन्तत : ३६७ ई.स मा पहिलो पटक अथनेसियस (Athanasius) ले नयाँ करारमा २७ वटा पुस्तकलाई संग्रह गर्ने काम गरेका थिए । यसैलाई The council of Hippo and The council of corthage ले पनि ३९७ ई.स मा २७ वटा पुस्तकलाई मान्यता दियो । यसरी ई.स ३८६ देखि ३८८ मा पुरानो करार र नयाँ करार एकै ठाउँमा राख्ने काम भएको थियो । पछि ४०० ई.स तिर सन्त जेरोम ले भल्गेत ( vulgate) बाइबलको विकास गरे । १३ औँ सताब्दीतिर स्टेफन लान्गोटोले (Stphen Langoto) बाइबलमा अध्यायको ( Chapter) विकास गरे भने १६ औं शताब्दीतिर फ्रान्सका रोवर्ट इस्टाइनले बाइबलमा पदको ( verse) विकास गरे ।
विभिन्न विद्वानहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न भाषमा बाइबललाई अनुवाद गर्ने काम गरे । प्रख्यात विद्वान जन विक्लिफ (John Wycliff), ljlnod l6G8]n(William Tyndale) , र King Jemes Version (KJV) जस्ता व्यक्तिहरुले बाइबललाई अस्तित्व दिने काम गरे, भने पुरै बाइबललाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने काम पादरी गंगाप्रसाद प्रधानले ई.स १९१४ गरेका थिए । यसरी बाइबललाई विभिन्न भाषामा सरल बनाउँन आज पनि काम भईरहेको छ । यी काम हँुदाहुदै पनि बाइबलको बारेमा विवाद टिका टिप्पणी नभएको भने होइन, थुप्रै त्रुटी र कमजोरी पनि छन् । अन्ततः बाइबल सत्य छ, जीवित छ, र क्रियाशील छ । अन्तमा यो पूर्ण अनुसन्धान होइन तर लेख भएकाले थुर्पै लेख्नुपर्र्ने कुराअरु छुटेका छन् । तर बाइबल अस्तित्व छ,भन्ने अकात्य प्रमाण र परिणाम चाहिँ मण्डली हो । जुन मण्डलीलाई उहाँले चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ । जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ
(१कोर् ३ः११) । आमेन्
लेखक : बाइबल पुन